wararka maanta-arlaadii.net » Tartanka Kursigii uu ka dhintay Xildhiban Siraaji oo Ka socda Kismaayo
Magaalada Kismaayo ee xarunta KMG Jubbaland, ayaa lagu wadaa maalinta berri inay ka dhacdo doorashada Kursi ka mid ah Golaha Shacabka Somaliya oo yaalla Magaaladaasi.
Kursigaan ayaa waxaa ka geeriyooday Wasiirkii Hawlaha Guud Cabaas Siraaji oo lagu dilay Magaalada Muqdisho, waxaana muddo kadib hadda loo tartamayaa sidii loo buuxin lahaa Kursigaasi.
Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil, ayaa sheegtay in si wayn loo adkeeyay ammaanka Magaalada Kismaayo, diyaarna ay yihiin ergadii Doorashada Magaalada Kismaayo ku dooran laheyd xubinta Kursigaan.
“Waxaan Alle ka rajeynaynaa si nabad oo qurux badan noogu dhamaato doorashada, waxaan umadda u balan qaadaynaa in si cadaalad ah doorashada ku dhacdo, nidaamkii hore ee doorashada ayaana loo marayaa doorashada Kursigaan.” Ayeey tiri Xaliimo Yareey.
Dadka kursigaan u tartamaya waxaa ka mid ah Wiil la dhashay Cabaas Siraaji Wasiirkii hawlaha guud ee Muqdisho lagu dilay, waxaana uu maalmo ka hor gaaray Magaalada Kismaayo si uu uga qayb galo Doorashada dhaceysa.
Xubno kale ayaa ka mid ah dadka Kursigaan Doorashada u tartami doono, maadaama Beesha Kursiga iska leh Musharaxiin kala duwan ay u soo istaageen doorashada.